01/01/19 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Android ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး -Poweramp Music Player v3-build-819-play APK
Wednesday, January 30, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
Android ဖုန်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Player ပေါင်းများစွာတွေထဲ Poweramp Music Player လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါ။ mp3, mp4 တွေကြိုက်သလိုရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်သလို။ HD, DG, အစရှိသော အသံဖိုင်းလေးတွေကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက် တိုးနိုင် ချဲ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ့်အလန်းလေးပါ။ ဒီဆော့ဝဲလေးက 3rd party skins ကိုအခြေခံရေးဆွဲထားတာမို့ အခုလူတွေအသုံးများနေတဲ့ Music Player တွေထက်သူကတော့ တကယ့် Powerful Music Player တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ File Size 7.9 MB ပဲရှိပါတယ်။ Android Version 2.1 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြီးပြထားပါတယ်ဗျာ။
ဂိမ်းကြိုက်သူများအတွက် - Clash of Clans 11.185.15 for Android နောက်ဆုံးဗားရှမ်း
Tuesday, January 29, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
ဒီဂိမ်းဟာ Android ဂိမ်းတွေအနက်...ရေပန်းအစားဆုံးဂိမ်းတစ်ခုပါဖြစ်ပါတယ်...File size က 99.36mb လောက်ပဲဆိုတော့ သိပ်အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ...ဒီဂိမ်းကိုကစားမယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက်လေးတော့လိုအပ်ပါတယ်....အဓိကဂိမ်း Features တွေကတော့.. ၁)ရန်သူတွေတိုက်ခိုက်အနိုင်မယူနိုင်တဲ့ရွာတည်ဆောက်ခြင်း ၂)နဂါး...ဘာဘီယံ..မြင်းစီးသူ..လေးသမားတွေကိုလေ့ကျင့်ခြင်း.. ၃)ကမ္ဘာတစ်လွှားကလူတွေနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း စသည်နှင့်တစ်ခြားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်...Features များစွာပါဝင်ပါတယ်...
size : 99 .36 MB
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger 198.0.0.11.99 APK နောက်ဆုံးထွက်
Saturday, January 26, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
facebook သုံးတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက် facebook messenger လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကိုတော့အားလုံးသူသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ facebook နှစ်ကောက်ရှိသူများအတွက်ကတော့ ပိုပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ facebook apk တစ်ခုသုံး facebook messenger မှာတစ်ခုသုံးပေ့ါ ။ နောက်ပြီး ဒီမှာတော့ ဟိုတုန်းက version ထက် ချစ်စ၇ာ အရုပ်ကလေးများပါလာတာကိုတွေ၇ပါတယ်။ updated သုံးချင်းတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက် အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Android ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး -Poweramp Music Player v3-build-817-play APK
Thursday, January 24, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
နေရာအနှံက video တွေ mp3 music တွေကို download ရယူရန် HVidMate - Downloader & Private Browser 2.5.23 apk
Monday, January 21, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
Facebook, Youtube, Soundcloud နှင့် အခြားသော Video Website, Music Website များစွာမှ Video နှင့် Mp3music တွေကို Download ရယူနိုင်တဲ့ Vidmate ဆိုတဲ့ Android Application နောက်ဆုံးထွက် Updated လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာ Facebook သုံးပြုပြီး Video ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် အခက်ခဲ့ရှိများအတွက် အ၇မ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီ Vidmate လေးက Facebook က အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ အခြားသော Full Movies တွေ/ Video တွေ Tv show တွေ Radio ဆိုဒ်မှားမှပါ အလွယ်ကူဆုံး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ မိမိသိတဲ့ video site , music site တွေကိုလဲ bookmark အဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး အလွယ်တကူပြန်ဝင်ကာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းထဲမှ video များကိုလဲ video format များစွာကို ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ video player တခုအနေနဲ့လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲ။ အဆင်ပြေပါစေ.
Saturday, January 19, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
အထွက် Call ကို ပိတ်ထားနိုင်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးဝင်ပုံကတော့ ..
ကိုယ့်ဖုန်းကို ခဏခဏ ငှားပြီး ဖုန်းခေါ်တဲ့သူတွေကို
ဖုန်းခေါ်လို့မရအောင် အထွက် Call ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ပိတ်တဲ့နေရာမှာ
မြန်မာလို message ရေးပြီး ဖော်ပြခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ..
“ ငွေလက်ကျန်မရှိသောကြောင့် ခေါ်ဆိုလို့မရနိုင်ပါ ”
“ NETWORK ERROR”
“ ဟေ့ကောင် .. ကျွန်တော့်ဖုန်းကနေသူများကိုခေါ်လို့မရနိုင်ပါ ”
..... အဲ့ဂလို message တွေကို ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ ဖော်ပြခိုင်းလို့ရတယ်ဗျ
သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်လို့လဲရတယ်။ Out Call Blocker ကိုဖွင့်လိုက်ရင် Password အနေဖြင့် သုညလေးလုံး ရိုက်ကာ App ထဲကို ၀င်ရပါမယ်။
ပြီးမှ Password ကို ကိုယ်ကြိုက်တာ ပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်။ အထွက် Call ကို
ပိတ်လိုက်ရင်တော့ ဘယ်လိုမှ ဖုန်းခေါ်လို့မရတော့ပါ။ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ message ပဲ ပေါ်လာပါမယ်။ အတည်ပဲသုံးသုံး အပျော်ပဲသုံးသုံး ကြိုက်သလိုသာ သုံးပေတော့ .. ရော့ ..
ကာရာအိုကေသီးချင်းတွေဆိုနိုင်ပြီးအသံတွေပါဖမ်းယူထားနိုင်မယ့်- Sing! by Smule 6.1.3 APK
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ Version သစ်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းဆိုဝါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် သင့်တော် မယ့် Application လေးတစ်ခုပါဗျာ။ သီချင်းတွေကို Sing! Karaoke by Smule ဆိုတဲ့ Apk လေးနဲ့ဖွင့်ပြီး ကာရာအိုအေဆိုသလိုမျိုး ဆိုနိုင်မှာပါ။ တခါတည်းမှာပဲ မိမိဆိုထားတဲ့သီချင်းတွေကိုပါ အသံဖမ်းပြီးသိမ်းထား နိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ဒါဆိုရင်တော့လန်းတယ်နော် KTV တွေ Studio တွေမှာသွားပြီး အသံသွင်းစရာမလို ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေပြီးပေါ့။ Apk ရဲ့နမူနာပုံစံကိုအောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြထားပါ တယ်ဗျာ။ Android OS 4.0.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် - Facebook 204.0.0.24.101 APK
Friday, January 18, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
Android ဖုန်းဘော်ဒါတို့အတွက် ဘော်ဒါတို့၏ မိတ်ဆွေးကောင်း Facebook ဗားရှမ်းသစ်လေဖြစ်တဲ့ facebook application လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အထူးအထွေ ပြောစရာမလိုပါဘူး Facebook ကို ကလေးတွေသိပြီး အခုရှိရင် .... Updated လိုချင်းသူများအတွက် အောက်မှာသာဒေါင်းလိုက်ပါတော့ဗျာ....ဒီကောင်လေး၏ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော60MB ဖြစ်ပြီး Android OS, Tablet အားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
Thursday, January 17, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
Wednesday, January 16, 2019 Mr.Win Hlaing No comments
Android ဖုန်း Tablet ပေါ်မှာ Video File တော်တော်များများကို Format လုပ်ပေးနိုင်တဲ့MX Player Pro နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းကိုတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် original ပါတဲ့ video player က တချို့ video file တွေကို Support မလုပ်ပေးပါဘူး။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ ဒီPlayer လေးက အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။video file တော်တော်များများကို supported လုပ် ပေးနိုင်ပါတယ်။Subtitle Scroll Mode စနစ်ပါဝင်တာမို့စာတန်းထိုးစနစ်နဲ့ Format လုပ်ထားတဲ့ Video File တွေကိုလည်း အဆင်ပြေပြေ ဖွင့်ကြည့်နိုင်စေပါတယ်။ဒါ့အပြင် video file ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရာမှာ Connection အတက်အကျ မမှန်၍ ထစ်ငေါ့ သွားသော နေရာများကို ဒီ player ကနေ အထစ်အငေါ့ နည်းပါးစွာနဲ့ ကြည့်ရှုလို့ ရစေတာကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။
သိုင်းသိုင်းချင်း ၁ (တက္ကသိုလ်ဝင်းကြွယ်)
Wednesday, January 16, 2019 AungKyaw No comments
Book Update : 01/16/2019
Book Size : 15MB
Book Paper :100
Book Download : DwonLoad Here
All Cracked Box Tools (14)
Amdroid game (127)
Andriod Application (1331)
Andriod applications (202)
Android Antivirus (27)
Android Antiviurs (12)
Android apk (21)
Android Application (2829)
Android Applications (559)
Android camera (46)
Android Facebook (97)
Android firmware (50)
Android Fonts (6)
Android game (49)
Android Games (1327)
Android keyboard (5)
Android Launcher (265)
Android Live Wallpaper (114)
Android Myanmar Font (39)
Android Photo Editors (20)
Android Tool (62)
Android Video (10)
Android နှင့် မြန်မာ Font (612)
Asus root (19)
browser for Android (21)
Cleaner ဆော့ဖ်ဝဲလ် (102)
Computer Softwares (112)
Computer နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းများ (95)
Driver Software (127)
Driver Tools (1)
Englishလို IT နည်းပညာ Ebook (19)
Firmware တင်နည်း (5)
Internet Download Manager (301)
iOs နှင့်ဆိုင်ရာ (67)
ISO Burner (15)
Microsoft Office 2010 (26)
Microsoft Office 2013 (31)
Microsoft Office Activator (53)
Mobile Knowledge (486)
Mobile Phone security (9)
Mobile Service Online Training (2)
Mobile Tutorial (80)
Mobile သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ (2577)
MTK Tools (2)
Music Album (45)
Registry Cleaner (29)
samsung galaxy root လုပ်နည်းများ (42)
Screen Locker (5)
Video Converter (73)
Video Editing (145)
Window 10 (30)
Window 10 Activator (13)
window 8 (72)
Window Activator (2)
Xiaomi Firmware (24)
Xiaomi Root (37)
မြန်မာ Font Installer (5)
ရသ စာပေ (32)
Android ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး -Poweramp ...
ဂိမ်းကြိုက်သူများအတွက် - Clash of Clans 11.185.15 ...
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger 198.0.0.11.99 APKေ...
အထွက်callကိုသူများတွေခေါ်လို့မရအောင်လုပ်ပေးမဲ - Cal...
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် - Facebook 204.0.0.24...
သိမ်မိုက်တဲ့ကောင် လက်ညိုးတောင် (မောင်ညိုမှိုင်း -သန...
မြန်မာပြည် မြေပုံ ဖုန်းဆော့ဝဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များအတွက် လေ့လာသင့်သော မြန်မာဖု...
ဖုန်းမှာထည့်သွင်းထားသင့်သော မြန်မာပြက္ခဒိန် ဆော့ဝဲလ...
စာပေးဝါသနာရှင်များ ဒေါင်းယူထားသင့်တဲ့ ဖုန်းဆော့ဝဲလ...
Mi ဖုန်းများအတွက် မြန်မာစာအလွယ်ထည့်သွင်းနိုင်သောTT...
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်လို့ လျှောက်လွှာရေ...
Myanmar English Speaking apps
ဖုန်းကို ပေါ့ပါးသွက်လပ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချမှုကို အမြ...
လူကြီးလူငယ်မရွေး အကြိုက် ဂိမ်း Candy Crush Saga 1...
ဖုန်းထဲကနေ တက်တူးထိုးချင်သော မိတ်ဆွေများအတွက်
Facebook ပေါ်က Video တွေကို HD အရည်အသွေးနဲ့ဒေါင်းယူ...
Zapya - File Transfer, Sharing 5.7.4(US) APK
ဖုန်းကနေ နိုင်ငံတကာရဲ့ ငွေဈေးတွေကိုအလွယ်တကူ သိနိ...
ဆမ်းဆောင်းဖုန်းအတွက် မြန်မာစာအလှ ဖောင့်စတိုင်
ဝက်ဆိုဒ်တွေ ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ ကြော်ငြာတွေတက်နေတယ်ပြော...
ဖုန်းအတွက် ဖုန်းမြည်သံ တေးသံများကို ထည့်သွင်းနိုင်...
ဗီဒီယိုတွေ သီချင်းတွေ အပြင် ဖိုင်တွေကို အမြန်ဆုံး ...
HTML စတင်လေ့လာနေသူများအတွက် Html5Myanmar
မြန်မာ အင်္ဂလိပ် သို့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်မျိုး ဘာပြန...
နောက်ခံဓါတ်ပုံလေးတွေ ထားပြီး စာရိုက်ချင်သူများအတွက...
ဖုန်းအတွက် ၂၀၁၉ အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန်
ဖုန်းကနေ ဘော်လုံးပွဲတွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပ...
မိမိဖုန်းရဲ့ နောက်ခံကို မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံထည့်နိုင်...
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Viber Messenger_v9.9.4.11 APK
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Messenger – Text and Video Chat f...
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Facebook V203.0.0.16.293 APK
ဖုန်မှာ ရှမ်းကိုးမီး ဂိမ်းကစားချင်သူများအတွက်တင်ပေ...
ဆမ်ဆောင်းဖုန်းများအတွက် မြန်မာစာနှင့်ဖောင့်စတိုင် ...
အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော စာအုပ်
MIUI7ကနေ MIUI 9.2 ထိ MI Phones များကိုမြန်မာစာ လ...
ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် 1.0 APK
wave money account ဖွင့်နည်း
ဖုန်းလာရင် lED မီးလေးလင်းပြီး အချက်ပြပေးနိုင်တဲ့ -...
ဖုန်းဘက်ထရီ အားဝင်ပြီးအား ကြာရှည်အသုံးခံစေမယ့် - P...
ဖုန်းမှာ ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းယူချင်သူများအတွက် vi...
ဖုန်းမှာ အလွယ်တကူ ရွတ်ဖတ်နိုင်သော သမ္ဗု​ဒ္ဓေ ၅ မျိုး...
Google ဆော့ဝဲထည့်သွင်းချင်သူများအတွက် 71.0.3578.99...
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger 196.1.0.37.99 APKေ...
GT Contact Recovery 1.2.4 APK
► 2017 (2587)
► 2016 (5929)
► 2013 (3269)